News Feed Archives | Page 22 of 41 | Frontier Myanmar
ဦးကျော်ကျော်မောင်အား ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြန်လည်လျာထားမှုကို လွှတ်တော်အမတ်များ ဝေဖန်
ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့တွင် ရာထူးသက်တမ်းပြည့်မည်ဖြစ်သည့် ဦးကျော်ကျော်မောင်အား ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန် သမ္မတ၏ အဆိုပြုမှုအပေါ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့က ဝေဖန်လိုက်သည်။ “အရင်လူပြန်ခန့်တယ်။ အရင်အတိုင်းပဲ ပြန်သွားမှာပဲ” ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်လှိုင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။ “အရင်အတိုင်းဆိုတာ အစိုးရလိုငွေတွေကို ဗဟိုဘဏ်က ဖြည့်ဆည်းပေးနေမယ်။ ဈေးကွက်က.
ရခိုင်အကြမ်းဖက်မှုကာလအတွင်း စစ်တပ်ထံ လှူဒါန်းမှုအတွက် ဂျပန်ကီရင်ဘီယာ ဝေဖန်ခံနေရ
ကလဲရ် ဟမ်မွန် ရေးသားသည်။
MIC ဥက္ကဋ္ဌသစ် အရည်အချင်းနှင့် ရာထူး ဆီလျော်မှု ရှိမရှိ အမြင်များ ကွဲပြား
ကျော်လင်းထွန်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းအား မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် (MIC) ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ရာ သံတမန်အဖြစ်သာ အဓိကဆောင်ရွက်ဖူးသည့် ၎င်းတွင် ထိုတာဝန်အတွက် လိုအပ်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရှိမရှိအပေါ် ပညာရှင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြား အမြင်ကွဲပြားမှုများ ရှိလာသည်။ MIC ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်.
ပြည်သူများ စိတ်အေးအေး စောင့်ကြည့်ရန် စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးသစ် ပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအတွက် စိန်ခေါ်မှုအများကြီး ရှိနေပေမယ့် ပြည်သူများ စိတ်အေးအေးထားကြရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသစ်က ယနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ “စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတော့ လျှော့တွက်လို့ မရဘူး” လို့ ဝန်ကြီးသစ် ဦးစိုးဝင်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ကတိသစ္စာပြုပြီးနောက် သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ “ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက် တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့.